Madasha Badbaadada Galmudug oo looga dhawaaqayo Muqdisho | KEYDMEDIA ENGLISH
U jeeddada dhidibada loogu taagayo, Madashan, ayaa lagu sheegay in cadaadis lagu saarayo Qoorqoor, oo hore u diiday farriimo ay odayaasha dhaqanka, siyaasiyiinta, aqoon-yahannada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada Galmudug u gudbiyeen.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madasha Badbaadada Dowlad Goboleedka Galmudug, ayaa la filayaa in Arbacada berri ah looga dhawaaqo Caasimadda Soomaaliya, waxaana si weyn degmooyinka gobolka looga dareemayaa abaablka munaasabadda daahfurka Madasha.
Siyaasiyiin ka soo jeeda degaannada Galmudug, oo ay ku jiraan Wasiirro iyo Xildhibaanno, ku soo shaqeeyay xilal Federaal iyo heer Maamul Goboleed, ayaa ka mid ah xubnaha ku mideysan madashan ka dhanka ah hoggaanka Galmudug.
Sida ay Keydmedia Online, u sheegeen xubno muhiin ah oo ka mid ah Madasha Badbaadada Galmudug, ee dhawaan lagu dhawaaqayo, Golaha ayaa sidoo kale, looga dhawaaqi doonaa Magaalooyinka Gaalkacyo, Guriceel iyo Dhuusamareeb.
Golahaan, waxa ay si adag kaga soo horjeedaan Madaxweynaha Galmudug, Qoorqoor, kaas oo lagu eedeeyay inuu ku fashilmay hoggaanka maamulka, isla-markaana uu intii uu ku fadhiyay kursiga ugu sarreeya maamulka uu u adeegay kaliya Kooxda Farmaajo.
Qoorqoor, wuxuu qeyb ka noqday, hoggaanna u yahay maamullada uu Farmaajo u adeegsado, muddo kordhinta, iyo xiisadaha siyaasadeed, wuxuuna muddo dheer si gooni ah u dhibaateynayay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda, Madaxmed Xuseen Rooble.
Qoorqoor, wuxuu si laga xishoodo u boobay kuraasta Aqalka Sare ee Baarlamaanka JFS, wuxuuna tartanka kuraasta u xiray shaqsiyaad Farmaajo qoray, halka uu daraka siyaasadda ka fogeyay siyaasiyiinta bulshada degaanka ee dadka si muuqata u soo matalay.
Tan iyo markii Qoorqoor galay xaafiiska Madaxweynaha Galmudug, Al-Shabaab ayaa kala gooyay isku socoka magaalooyin muhiim ah oo dhaca Galmudug, waxa ay la wareegeen degaanno aysan waligood ka arrimin waxayna bililiqetsteen gaadeed uu maamulku lahaa.
Marka laga yimaado in Madasha Badbaadada Dowlad Goboleedka Galmudug, ay xubno muhiim ah ka yihiin siyaasiyiin miisaan culus leh, haddana waxaa la rumeysan yahay in ay geed-fadhi u yihiin xubno ka tirsan Midowga Musharixiinta, oo ay si adag isku hayaan Qoorqoor.